Ny rindranasa tsara indrindra hanaovana antso an-tsary maimaimpoana amin'ny Android | Androidsis
Fampiharana tsara indrindra hanaovana antso an-tsary maimaimpoana amin'ny Android
Aaron Rivas | 26/07/2021 00:20 | Fampiharana Android, Fitaovana Android
Ny chat video na ny antso an-tsary dia iray amin'ireo endrika serasera be mpampiasa indrindra ankehitriny. Mamonjy antsika betsaka amin'ny tsy maintsy fanoratana sy fanamorana ny fanehoana fihetsem-po, fikasana ary fahatsapana izany, amin'ny alàlan'ny fahaizana miteny amin'ny alàlan'ny efijery amin'ny fotoana tena izy amin'ny fampiasana ny fakantsary finday fa tsy amin'ny endrika an-tsoratra.
Misy maro Fampiharana Android manolotra endri-chat amin'ny chat video, ary ny sasany amin'ireo tsara indrindra dia izay miresaka momba an'ity lahatsoratra fanangonana ity, mba hahafahanao mahazo ilay tianao indrindra ary manomboka miantso video ny namanao, ny fianakavianao, ny mpiara-miasa aminao ary ny olom-pantatrao.
Etsy ambany no hahitanao andian-tsarimihetsika fampiharana sarimihetsika tsara indrindra ho an'ny finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola bitika ao anatiny, izay mamela ny fidirana amin'ireo fiasa premium sy fidirana amin'ireo endri-javatra maro hafa, ankoatry ny zavatra hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Ny zavatra iray hafa dia ny maro amin'ireo fampiharana ho hitanao eto dia manana asa fandefasan-kafatra eo no ho eo sy / na manana kalitao amin'ny tambajotra sosialy, noho izany mihoatra ny iray no ho fantatrao. Eny eny, andao isika hanatona azy.
2 Fihaonana ZOOM
4 JusTalk - antso an-tsary maimaim-poana
Tsy mety ny tsy fanombohana an'ity lahatsoratra fanangonana ity amin'ny apps tsara indrindra amin'ny chat video Skype, izay angamba ilay fampiharana malaza indrindra amin'ny fanaovana antso an-tsary ary iray amin'ireo safidy voalohany amin'izany anio.
Skype dia iray amin'ireo fitaovana sy fampiharana an-tsary mandroso sy feno indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny finday Android, izany no antony Manana fampidinana mihoatra ny 1,000 tapitrisa (1 miliara) amin'ny alàlan'ny Play Store. Afaka miantso video miaraka amin'ny namanao ianao, na dia afaka manao vondrona misy mpikambana hatramin'ny 24 aza. Ny tsara indrindra? Izy ireo dia amin'ny famaritana avo lenta, zavatra izay tsy atolotry ny fampiharana rehetra amin'ity karazana ity, dia tsara homarihina.
Mazava ho azy, amin'ny Skype dia azonao atao koa ny manoratra amin'ireo olona ifandraisanao sy amin'izay tianao Hafatra SMS manerantany, iray amin'ireo fiasa miasa indrindra ananany. Azonao atao koa ny mampiasa azy io ho toy ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo, satria misy resaka amin'ny karazana, emoji, GIF ary safidy maro isan-karazany hanamboarana ny mombamomba anao sy handefasana hafatra misy sary sy horonan-tsary. Raha tsy te-hanoratra ianao dia afaka manao antso am-peo amin'ny olona iray mora sy tsy misy fetra ihany koa.
Amin'ny lafiny iray, Skype dia manana sehatr'asa madio sy mora ampiasaina. Ny zavatra iray hafa dia ny ahafahanao mamorona kaonty ao anatin'ny segondra vitsy, nefa tsy mameno saha maro, ary mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra. Mety indrindra amin'ny firesahana horonan-tsary amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao.
Skype: fiantsoana IM & horonantsary maimaim-poana
ZOOM dia mety ho iray amin'ireo fampiharana antso an-tsarimihetsika video telo na dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Ity rindranasa ity dia iray hafa izay manana laza malaza manerantany, miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 500 tapitrisa izay manamarina izany.
Ary ity fampiharana ity koa dia misy chat video misy famaritana avo lenta, saingy misy zavatra tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny ankamaroany dia ny fanohanan'izy ireo mpampiasa marobe amin'ny fifaninanana video, miaraka amin'ny mpandray anjara hatramin'ny 100. Raha mividy ilay kinova aloa ianao dia olona sahabo ho 1,000 no afaka mahazo antso an-tsary mitovy.
Mazava ho azy fa mahatratra 100 ny mpandray anjara ekeny ary mandritra ny 40 minitra fotsiny; ity, raha tsy mividy drafitry ny lampihazo ianao. Raha mila faharetana faran'izay betsaka sy asa mandroso kokoa ianao, afaka mandoa drafitra manomboka amin'ny 15 euro ka hatramin'ny 20 euro isam-bolana ianao.
Eto dia tsara ny milaza fa ho an'ny mpampiasa iraisana dia tsara kokoa ny mampiasa ny kinova maimaimpoana na ny iray mora indrindra. Ireo lafo indrindra dia mikendry indrindra ireo orinasa kely sy lehibe, ary koa efitrano fihaonambe, mpianatra ary vondron'asa lehibe.
Zavatra iray hafa ananan'i ZOOM dia ny famelana ho mora ny fifandraisana sy ny fampidirana amin'ireo antso anaty vondrona vondrona. Ireo dia azo amin'ny alàlan'ny rohy na fanasana amin'ny alàlan'ny mailaka sy maro hafa.
Etsy ankilany, manana mpiara-miasa koa ny ZOOMfizarana fandefasana hafatra eo noho eo izay ahafahanao mandefa hafatra an-tsoratra, sary, horonan-tsary ary rakitra, ary koa emoji ary maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, toa ny Skype, ahafahanao manao antso am-peo, raha sendra te-hitsambikina antso video ianao fa tsy hampiasa fakan-tsary hiresahana amin'ny olona iray. Ho setrin'izany, azonao atao ny miditra amin'ny fantsom-pifanakalozan-dresaka ho an'ny daholobe sy tsy miankina, mba hifandraisanao amin'ny olona iray na maromaro ary hifandray hatrany amin'ny fotoana rehetra.
Google Duo dia iray amin'ireo fampiharana chat video miaraka amina asa maro kokoa hanatanterahana azy ireo. Manolotra kalitaon'ny sary tena tsara amin'ny antso an-tsary, amin'ny HD. Inona koa, mamela ny antso vondrona hatramin'ny 32 mpikambana, manao azy ho tonga lafatra ho an'ny vondrona mpianatra, vondrona miasa, efitrano fianarana, sns. Mandritra izany fotoana izany, dia mora be ny mampiasa azy ary ny interface tsara dia somary sariaka.
Tahaka ireo fampiharana roa teo aloha izay efa nofaritana, Google Duo dia mamela ny fandefasan-kafatra eo noho eo, izay ahafahanao manao ampifanaraho amin'ny hafatra mahafinaritra ny hafatrao horonan-tsary ary zarao ny hafatra am-peo, sary, naoty ary emoji. Azonao atao ihany koa ny manoratra sy manao sary amin'ny antso an-tsarimihetsikao na mametraka saron-tava mampihomehy mba hihomehezana miaraka amin'ny olom-pantatrao, mpiara-miasa aminao ary fianakavianao.
Misy zavatra mahaliana izay ananan'i Google Duo maody maivana, miaraka amin'izany, araka ny tondroin'ny anarany, azonao atao ny mifampiresaka video amin'ny toerana tsy dia misy jiro azonao ahitanao mazava tsara ny tenanao. Miaraka amina fiasa mihetsika ity, miantso an-tsary ireo fanatsarana maizina.
Etsy ankilany, mamela anao hanao antso am-peo miaraka amin'ireo namanao ianao ary maka sary amin'ny antso an-tsary mora foana sy haingana hanangonana fotoana tsy azo tononina. Mazava ho azy fa tsy maintsy manana kaonty mailaka Google (Gmail) ianao mba hahafahanao mampiasa Google Duo sy hanararaotra ireo tombony rehetra azo avy aminy.
JusTalk - antso an-tsary maimaim-poana
Ny safidy tsara indrindra hanaovana chat video maimaimpoana, antso an-tsary ataon'ny vondrona sy antso am-peo miaraka amin'ny namanao, olon-tianao, mpiara-miasa ary olom-pantatrao dia ny JusTalk. Io fampiharana dia mamela mandefasa sy mandray sary, feo, horonan-tsary, toerana, sticker, GIF ary maro hafa amin'ny chat miaraka amin'ny olona iray na amin'ny vondrona. Mazava ho azy, ny mampiavaka azy dia mifantoka amin'ny fanaovana chat video, mazava ho azy.
Ny antso an-tsary dia azo atao amin'ny olona iray na hatramin'ny 50. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny mampifaly azy ireo amin'ny alàlan'ny doodle, sticker, sary ary horonan-tsary misy, ary ireo dia ao anaty vahaolana HD ary miaraka amina feo mazava tsara izay mamela ny fifandraisana ho tonga lafatra.
Etsy ankilany, JusTalk dia miaraka amin'ny maody maizina ahafahanao mivezivezy ao anatin'ny segondra vitsy amin'ny alàlan'ny fikirakiran'ny rindrambaiko, mba tsy hanelingelina anao sy hampiasatra ny masonao ny interface-jolony. Ho fanampin'izany, ny antso, ny hafatra ary ny antso an-tsary dia voahidy, ka voaro hatrany ny fiarovana sy ny fiainana manokana.
Ity rindrambaiko ity dia efa mirehareha mihoatra ny 10 tapitrisa amin'ny alàlan'ny Google Play Store ary manana naoty 4.2 kintana ao amin'ilay magazay, izay miorina amin'ny fanehoan-kevitra miabo efa ho 300.
Mba hamaranana ity lahatsoratra fanangonana ireo rindran-tsary horonantsary maimaimpoana maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny Android ity dia entinay any amin'ny Facebook Messenger, iray izay tsy nanolotra ny fiasan'ny antso an-tsary tamin'ny voalohany, fa izy io dia napetraka ho iray amin'ireo sehatra be mpampiasa indrindra amin'ny mpampiasa rehetra. izao tontolo izao hifandraisana.
Natao ho an'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra hafatra avy hatrany ny Facebook Messenger. Izy io dia famenon'ny fampiharana Facebook ofisialy ho an'ny Android ary manitatra mihoatra ny fiasa izay azon'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka hafa atolotra. Ary amin'izany dia azonao atao ny mahita ireo tantara na toetoetran'ireo namanao nanampy tamin'ny tambajotra sosialy, hamaly azy ireo, mampiasa emoji, marika, GIF ary ampanjifaina ireo fanehoan-kevitra amin'ireo hafatra, ankoatry ny zavatra maro hafa.
Io dia ahafahanao mijery ny mombamomba ny mombamomba ny Facebook amin'ireo fifandraisana, mampihatra anaram-bosotra, manamboatra ny lohahevitra, manokatra resaka miafina ho an'ny fiainana manokana sy fiarovana ny hafatra ao anatiny ary maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, tsy mandroaka maody maizina ary misy fizarana hanovana ny avatar, handaminana ny fampandrenesana sy ny feo, hitahirizana data, handefasana hafatra an-tsoratra (SMS) ary hamoronana bubble chat.
Ny antso an-tsary azonao atao Facebook Messenger dia mamela olona 50 hifandray, na dia tsy izy rehetra aza dia ho hita amin'ny fotoana iray, lojika. Ny famaritana ireo dia amin'ny famaritana avo, toy ny audio, noho izany ny traikefa amin'ny chat video dia mendrika ary iray amin'ireo antony mahatonga an'ity fampiharana ity ao amin'ity lisitra ity.
Ary farany, ity fampiharana ity dia misy maherin'ny 5 miliara (5 miliara) alaina ao amin'ny Play Store, izay no be mpampiasa indrindra amin'ity lahatsoratra fanangonana ity amin'ny ankapobeny, na dia tsy safidy voalohany hanaovana chat video aza izany, marihina.
Messenger: hafatra sy antso an-tsary maimaimpoana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tsara indrindra hanaovana antso an-tsary maimaimpoana amin'ny Android
Ahoana ny fampiasana VPN amin'ny telefaona finday?
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Fintonic amin'ny Android